Ihe kpatara na ndị na-azụ ahịa ji enwe nkụda mmụọ site na nhazi nkeonwe B2B E-Commerce (Na Otu esi edozi ya) | Martech Zone
Kedu ihe kpatara nkeonwe B2B E-commerce ji ewute ndị na-azụ ahịa (na otu esi edozi ya)
Tọzdee, Disemba 21, 2021 Tọzdee, Disemba 21, 2021 Tim Beyer
Ahụmahụ ndị ahịa adịla anya, ma na-aga n'ihu na-abụ, ihe kacha mkpa maka B2B ulo oru na njem ha na mgbanwe dijitalụ. Dịka akụkụ nke mgbanwe a na dijitalụ, òtù B2B na-eche ihe ịma aka dị mgbagwoju anya ihu: mkpa ọ dị ịhụ na ha abụọ na-agbanwe agbanwe na ogo n'ofe ahụmịhe ịzụrụ n'ịntanetị na n'ịntanetị. Agbanyeghị, n'agbanyeghị mbọ kacha mma nke otu ụlọ ọrụ na itinye ego dị ukwuu na azụmahịa dijitalụ na e-commerce, ndị na-azụ ahịa n'onwe ha ka na-enwechaghị mmasị na njem ịzụ ahịa ịntanetị ha.
Dabere na data ọhụrụ sitere na Sapio Research na ịzụrụ B2B, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20% nke ndị na-azụ ahịa B2B taa na-eche na ahụmịhe ndị ahịa ha na-enwe n'ịntanetị dị ala karịa nke ha na-anọghị n'ịntanetị.
2022 B2B onye na-azụ ahịa, ike nke ịzụrụ mmekọrịta n'ime ụwa B2B na-agbanwe agbanwe
Akuko a, nyere ya ikike Sana Commerce, Na-enyocha ọnọdụ nke ahụmahụ ndị na-azụ ahịa B2B site na oghere nke isi ihe ọmụma kachasị mma na ntụkwasị obi: ndị na-azụ ahịa n'onwe ha. N'ime nchọpụta ndị kacha dị egwu? Naanị 1 n'ime ndị na-azụ ahịa 4 nwere obi ike na ụlọ ọrụ ahụ mgbe niile na-enye ozi ziri ezi n'ofe ọwa ndị na-eweta ha n'ịntanetị na ndị na-anọghị n'ịntanetị. Ma ọ bụrụ na isi data ndị ahụ na-ekwu ihe ọ bụla, ọ bụ na oghere B2B nwere ọtụtụ ohere iji too n'anya ndị ahịa ya.
Yabụ, kedu ka eziokwu nke ịzụrụ B2B dị ka ndị na-azụ ahịa si ele?
Ndị na-azụ ahịa B2B taa na-azụta ihe karịrị 428 azụmahịa dị mkpa kwa ụbọchị, na-emefu nkezi $3 nde kwa afọ n'ịntanetị. Ọtụtụ n'ime ha na-atụgharị na saịtị e-azụmahịa nke onye na-ebubata ya dị ka ọwa nhọrọ mgbe ị na-enye iwu ndị a. N'ụzọ dị mwute, Otú ọ dị, 1 n'ime mmadụ ise ọ bụla n'ime ndị na-azụ ahịa na-eche njehie iwu oge ọ bụla ha na-azụta (na-ezo aka na data ezighi ezi, dị ka ngwa ahịa ezighi ezi, ngwaahịa, mbupu, na ozi ọnụahịa), dị ka isi ihe mgbochi. Ihe dị ka 94% na-akọ banyere ahụmahụ ndị ahịa n'ụdị ụfọdụ na usoro ịzụrụ B2B. Ikekwe nke kachasị, ndị na-azụ ahịa kọrọ nnukwu ọdịiche dị n'etiti atụmanya na eziokwu ma a bịa n'ikike nhazi ịntanetị na B2B.
Site na ụdị esemokwu dị n'ịntanetị na-emekpa ndị ahịa B2B ahụhụ, ajụjụ doro anya dị n'aka bụ: kedu ka otu dị iche iche ga-esi lụso nkụda mmụọ a ọgụ n'akụkụ ndị na-azụ ahịa? Na, nke ka mkpa, kedu ihe na-eri ọ bụghị ime otú ahụ?
N'oge ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ, enweghị ọrụ nwere ike imefu ụlọ ọrụ azụmaahịa ha. Na-eche ihu na-eme nke ọma ma ọ bụ dị ndụ, Pepco leveraged Sana Commerce's integrated ERP na e-azụmahịa ngwọta, iji malite a ọhụrụ aga-na-ahịa atụmatụ na 2020. Ijikọ e-azụmahịa na ERP mesiri a streamlined usoro na a enweghị nkebi na-azụ ahịa B2B ahụmahụ.
Ụzọ jikọtara ERP nke Sana bara uru n'inyere Pepco aka ka ọ bụrụ onye na-ekesa mmanụ ọkụ, ihe mmepụta ihe na HVAC dị afọ 30 nye ndị na-emepụta ihe na ndị na-ekesa ngwaahịa dị oke mkpa, dị ka aka sanitizer site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
Ndị na-azụ B2B taa maara ihe ha chọrọ. Ha maara ihe ha tụrụ anya ya. Ma ha dị njikere ịpụ n'ebe ndị na-ebubata ngwaahịa ha kacha elu ma ọ bụrụ na ha enwetaghị ya.
Ihe karịrị 62% nke ndị na-azụ ahịa B2B chere na atụmanya ha na webụsaịtị ndị na-eweta ngwaahịa bụ naanị ntakịrị, obere, ma ọ bụ ezutebeghị ma ọlị. Na-atụghị anya ya, n'ihi ya, 4 na 10 B2B azụmahịa ugbu a na-eche iguzogide ọwa ịntanetị ha site n'aka ndị ahịa. Mana mgbe a jụrụ ya gbasara njirimara, arụmọrụ yana uru ndị na-azụ ahịa do chọrọ ịhụ site na ahụmịhe e-azụmahịa e-B2B ha, ha doro anya maka ihe ha chọrọ ịgbanwe, yana otu ndị na-eweta ngwaahịa nwere ike isi meziwanye onyinye ha n'ịntanetị.
Ọkara nke ndị na-azụ ahịa B2B nyochara kwenyere na onyinye dị ka mma ngwaahịa ka mma, ntụkwasị obi dị mma na ntụkwasị obi karịa aha ndị na-ebubata ya, ọnụahịa asọmpi na usoro nnyefe, yana ọrụ ndị ahịa dị elu ga-abụ ihe kacha eduga ha ịzụrụ (na ịzụghachi ọzọ) si n'elu suppliers. N'ime ndị na-azụ ahịa B2B na-eche ihe ịma aka nkeonwe ihu, enwere ndepụta dị ogologo nke ihe ga-ekwe nkwa ọkwa nke ndị na-azụ ahịa ahaziri onwe ha. n'ezie achọrọ.
Na mgbakwunye na igodo dị mfe na nlele ngwa ngwa, ndị na-azụ ahịa B2B chọrọ ka ha nwee ike ịhụ nnweta ngwaahịa maka ihe. ha ịzụrụ mgbe niile. Ha chọrọ inwe ike ịhụ na ịzụta dabere na ha ọnụ ahịa ndị ahịa kpọmkwem, nloghachi na usoro nnyefe, yana 28% chọrọ ka ha nwee ike ịmekọrịta chatbot nke maara akụkọ ihe mere eme ha. O doro anya mgbe ahụ, na ndị na-azụ B2B anaghị enwe nkụda mmụọ. Ha na-achọ mma ma na-achọkwu. Ọ dabara nke ọma, ikpo okwu agbakwunyere ERP nke Sana Commerce, Sana Commerce Cloud, emebere iji mee ka mgbagwoju anya nke ịzụrụ B2B dị mfe: ijikwa data ERP nke òtù B2B (dị ka data ndị ahịa, ozi ngwaahịa, na nkọwa ọnụahịa) iji mee ka ma njirimara- na ozi bara ọgaranya ahụmahụ ndị ahịa bụ ndị ọrụ enyi, streamlined, na a pụrụ ịdabere na ya.
Ka anyị na-abanye na 2022, ndị otu na-ebuputa ngwọta e-azụmahịa B2B na-eche ka iwu ka ọ banye, na-enweghị itinye uche na ahụmịhe ndị ahịa, ga-amata ngwa ngwa na ha anaghị eme nke ọma. Ahụmahụ na-adịghị mma na ntanetị ga-aga n'ihu na-achụpụ ndị na-azụ ahịa kama ikwe ka ọwa e-commerce bụrụ ihe ntinye ego maka azụmahịa B2B - na-eyi egwu itinye nnukwu ego na e-azụmahịa n'efu maka ụlọ ọrụ na-enweghị ike inweta ndị ahịa ha n'ịntanetị. ahụmahụ ruo n'ókè, na anya.
Tags: 2022 b2b onye zụrụ akụkọb2bb2b onye na-azụ ahịaahaziri onye zụrụ b2bb2b asịwo akụkọazụmahịa b2bb2b azụmahịa statsb2b njem ndị ahịab2b nkeonweb2b ịzụrụERPpekọkeonwegịazụmahịa azụmahịaahịa ígwé ojiinyocha sapio
Tim Beyer bụ COO zuru ụwa ọnụ nke teknụzụ mmụba Sana Commerce, ma dabere ugbu a na NYC dị ka Onye isi ala na onye isi ala mpaghara America. Tim nwere nzere bachelọ na International Business Administration na nzere Masters abụọ na ego (MSc) na Iwu ego (LLM, cum laude).
Kedu ihe bụ nkwenye email? SPF, DKIM, na DMARC kọwara